Ntụ iji koo achịcha | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "Ntụ iji koo achịcha"
Home-Dabere Ụzọ whiten Ezé
otú whiten ezé gị
Inwe a mara mma onwunwu ụzọ ezé bụ a dream maka mmadụ nile ka ogologo dị ka ị maara otú whiten ezé gị. I nwekwara ike ime ka ezé gị chawapụrụ na acha ọcha na a ezé whitening kit ma ọ bụ a eze ọrịa. Otú ọ dị, whitening ezé-esonụ ọ bụla n'ime ụzọ ndị a na-ejikarị na-efu kwa elu na ọtụtụ n'ime ndị ike imeli. Ọzọkwa, ndị a ụzọ na-adịghị mgbe niile nye mma na ndị kasị chọrọ n'ihi. E wezụga ihe na-azụrụ n'onwe ezé enwu gbaa ngwa iwu na oké ọnụ eze ịwa, i nwere otu ihe nhọrọ otú whiten ezé gị na-enyere aka na ị na-Unyi-free, pearly na-acha ọcha ezé enweghị etinye ọ bụla ibu ibu arọ on ị. Ị ga-enwe ike ịmata otú whiten ezé gị site na iji home ezé whitening usoro. Home ezé whitening ụzọ mgbe na-arụ ọrụ n'ụzọ dị irè karị karịa ụzọ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na, home dabeere na usoro na-eri gị nnọọ nta na i nwere ike n'ezie imeli. N'okpuru ebe a bụ ụzọ otú whiten ezé gị na ihe oké ọnụ na-eri.
Ntụ iji koo achịcha dị na kichin nke nta ọ bụla ụlọ ma na-enyere otú whiten ezé gị. Ndị na-eji mmiri soda dị ka a tastemaker. Mmiri soda na-eji ihicha nzube. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị irè iji wepụ pungent isi si na friji. Ị nwere ike iji mmiri soda maka nhicha ezé gị. Mmiri soda bụ abrasive na ọdịdị na a mma enyere gị aka wepu unyi si outermost elu nke ezé gị. Ezé enwu gbaa, -a ngaji nke soda, a ole na ole ntapụ mmiri na a ooh adụ-bristled atu. Were soda on your n'ọbụ aka wee tinye tụlee nke mmiri ya na-eme ka a tapawa nke ya. Ugbu a mikpuo na atu nime tapawa na asa ezé gị. I nwere ike iso usoro a dị ukwuu dị ka otu ugboro kwa izu.
E nwere ụfọdụ mkpụrụ osisi na-enyere otú whiten ezé gị; ma strawberries na-arụ ọrụ kacha mma iji whiten ezé gị. Ọ bụ otu n'ime ndị kacha, irè na-adịchaghị oké ọnụ n'ụlọ ezé enwu gbaa ngwa iwu. Strawberry e dere malic acid dị ka onye nọ n'ọrụ mgwa. Nke a organic mgwa enyere on otú whiten ezé gị atọghe ihe stains si elu nke ezé. Maka nsonaazụ kacha mma, i nwere ike iji mmiri soda tinyere strawberries. Bee otu ọkara sized mfri eke strawberry n'ime obere iberibe ma na-iberibe na a nnukwu efere. Mgbe ahụ tinye ọkara ngaji nke soda na mkpụrụ osisi na Mash ngwakọta na a ndụdụ ngwakọta ya nke ọma ruo mgbe ọ na-akawanye a pulpy anọgidesi. Ugbu a ime ihe a ngwakọta na ezé gị na a atu na-eche maka a nkeji ole na ole. Mgbe ahụ itucha ọnụ gị nke ọma na mmiri nkịtị. I nwere ike ime nke a n'ihi na mgbe na kwa izu.
Nke a bụ ihe ọzọ na ezi nhọrọ nke otú whiten ezé gị n'ụlọ. Na ọtụtụ ụlọ, ọ na-eji aka disinfect he na-adịchaghị mkpa scratches. Ọ ga-eji dị ka ihe magburu onwe ezé whitener. Kasị oké ọnụ toothpastes nwere peroxide dị ka isi mgwa. Ị nwere ike iji ya dị ka a mouthwash na kwa ezé whitener. Were otu-na-anọ cup of peroxide gị ọnụ na gurgle maka banyere otu nkeji. Mgbe ahụ itucha ọnụ gị juputara na mmiri nkịtị. Asa ezé gị mgbe iji peroxide na-esi ka mma a pụrụ isi kwuo. Ị nwere ike iji peroxide otu ugboro na ụbọchị ọ bụla iji nweta ihe ndị kasị atụ anya n'ihi.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 4, 2016 na 7:25 AM
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: Ntụ iji koo achịcha, otú whiten ezé gị, ezé chawapụrụ, whiten ezé gị